Yusuf Garaad: Sawir macnayaal badan
Sawir macnayaal badan
INTA AY GOORI GOOR TAHAY
Waa sawir weyn ku fadhiya. Aragtideyda waxaa iigu muhiimsan waa laba arrimood. Waa in uu muujinayo xiriirka Dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed meesha uu marayo, siiba qabaa’ilka qaarkood. Waxaa kale oo uu muujinayaa meesha uu marayo xiriirka Soomaaliya iyo dowladda Kenya oo derisnimo ka sokow ay ciidammadeedu gacanta ku hayaan ammaanka degaanno ka mid ah Soomaaliya, oo ay ku jirto magaalada muhiimka ah ee Kismaayo.
Isku soo duub, meesha aan annagu ka dhahno toban walaalaheenna Oromadu waxay dhahaan kudhan. Sawirkan waxaa ku dhan heerka ay mareyso siyaasadda Gudaha iyo Midda Dibadda, gaar ahaan tan Gobolka ee Dowladda Soomaaliya.
Inta ay goori goor tahay, Madaxweyne Xasan Shiikh iyo Ra’iisal Wasaare Saacid Shirdoon waa in ay gartaan in aanay ku sii socon karin sida ay hadda ku socdaan. Waa in ay qaataan dariiq cusub oo ay ku wanaajinayaan isfahamkooda siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan kuwa ka soo jeeda qabiilka hadda ka didsan siyaasaddooda. Oo markaa kalsooni ay ka abuurtaan waxna la isla qabto.
Xiiriirkooda Kenya waa in ay ku saleeyaan muhiimadda aadminnimo, siyaasadeed, ammaan, bulsho iyo ganacsi ee ay Kenya u leedahay Soomaaliya.
Posted by Yusuf Garaad at 10:16:00
Eedeyni xal ma keento
Recommendations to solving Kismayo crisis
Dhaqan mise Qadaf?